This is how the Somali Economy is currently booming.
Hanan Carab Cumar
Dhaqaalaha Soomaaliya JoogtaDhaqaalaha Soomaaliya (Af-Ingiriis: Somalian Economy) waa dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee wadanka Soomaaliya la leedahay dunida inteeda kale. Dhaqaalaha Soomaaliya waxaa ka mid ah ganacsiga Soomaaliya la leedahay dunida; sida…
Isticmaalk Internetka ee Soomaaliya Isticmaalka internetka ee Soomaaliya waa mid aad u sii kordhaya waqti xadirkaan oo aad ka dareemayso suuqyada Soomaaliya. Dadka Soomaaliya ku nool inta badan hada…
Somali Economy Somalia is endowed with entrepreneurs who have been able to flourish in the conflict-ridden country, and the Somali diaspora remains committed to investing in economic and…
Dhaqaalaha Soomaaliya ee Maanta Inkastoo aanay jirin hab dawladeed sax ah oo si fiican u shaqaynaya,hadana soomaaliya waxay joogtaysay dhaqaalaha aan rasmiga ahayn ee kasoo gelaya xoolaha nool,lacagaha xawaaladaha,isgaadhsiinta. Soomaaliya malaha…
Khadro Moxamed Cali
Sifooyinka qofka mas’uul nimada ku dhereeyaHordhacMarkii aad arakto ereyga “Mas’uulnimda” - wuxuu qofka ku fikireyya in qofka mas’uulnimada la yimaado uu yahay qof waxbartay ama shahaado jamaceed watto. Laakin se…
Who is SomaliBusiness.info
Waa Maxay SomaliBusiness, Qaab nooce ah ayay kaga cawin karta inu koro ganacsigaagu?Qorshaha SomaliBusiness.Info waxa uu yahay in uu dhiiri galiyo gacansatada Somaliyeed meel walba oo ay joogaan. Tirada gacansatada…